Rebuilding.travel na-ahọpụta Aleksandra Gardasevic Slavuljica dị ka onye isi ala mpaghara mpaghara maka Balkan
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Rebuilding.travel na-ahọpụta Aleksandra Gardasevic Slavuljica dị ka onye isi ala mpaghara mpaghara maka Balkan
Na-agbasa News Travel • Akụkọ Montenegro • News • ndị mmadụ • Mgbasa Ozi • Iwughachi • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Iwughari. Trevel họpụtara onye isi mpaghara mpaghara mbụ ya. A họpụtara Aleksandra Gardasevic-Slavuljica, MBA si Montenegro ka ọ bụrụ onye isi oche mpaghara mpaghara maka mpaghara Balkan. Ọ bụ Honorary Consul nke Seychelles na Montenegro.
Aleksandra Gardasevic-Slavuljica bụ onye ama ama, onye ọchichị, na onye isi na-ejide onwe ya iji hụ na ihe ịga nke ọma na azụmaahịa ọ bụla. O nwere ọtụtụ ahụmahụ na-eme ọtụtụ ahịa, nkwukọrịta ụlọ ọrụ, yana ọrụ ndị ọrụ ebere na mpaghara ọsọ ọsọ. O nwere ihe ndekọ nke rụzuru na-emepe ma na-eduga karịa 300 uka na niche ahịa mkpọsa na ebumnuche iji mee ka mmata mara, weghaara ahịa ọhụrụ, ma mee ka uru baa uru.
Alekasandra gosipụtara ikike ijikwa nkwukọrịta nsogbu ebe aha ụlọ ọrụ nọ n'ihe egwu. O nyefere nkwukọrịta ahịa ahịa (IMC) maka azịza ọ bụla.
Aleksandra nwere nnukwu ahụmịhe na mpaghara ndị a:
Nkwukọrịta ụgbọelu na mmekọrịta ụlọ ọrụ (MARCOM)
Ile ọbịa MARCOM
Ahụike & Mma MARCOM
Nkwukọrịta Ahịa Agbakwunyere
Mass na Niche Market Mgbasa ozi mmepe na mkpochapụ
Digital Marketing na Social Media
Branddị na njirimara ụlọ ọrụ
Nkwurịta Okwu Nsogbu
Nnyocha Ahịa na Nyocha
Ijikọ na International Marketing, Creative & PR genlọ ọrụ
Mmekọrịta Mgbasa Ozi Mba Nile
Njikwa mmekọrịta ndị ahịa
HR Strategic Planning & Imezu ya
Ọrụ Nchịkwa HR
Ndị ọzọ: Onye ndu, Ọganihu azụmaahịa mba ụwa, Mmụba ego na uru, Njikwa oru, Mzụta, Mkparịta ụka nkwekọrịta, Ọchịchị, Mmụta, NGO
Ọ rụrụ ọrụ na Montenegro ụgbọ elu, Crna Gora Airways, Gọọmentị nke Seychelles, ERA - European Regions Airlines Association, na ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị na mba ụwa.
Ugbu a, Aleksandra na-enye njikwa njikwa maka AGS Marketing ọ kachasị na ọtụtụ ndị mmekọ mba si ụlọ ọrụ ndị njem na ndị na-etinye ego.
Aleksandra nwere nzere masta na nzere bachelọ na nchịkwa azụmaahịa na azụmaahịa yana HR. Ọ na-asụ Bekee, Montenegrin, Serbian, na Croatian, na-enwekarị ihe ọmụma nke Italian na Russian.
Juergen Steinmetz, onye guzobere rebuilding.travel, kwuru, sị: “Obi dị anyị ezigbo ụtọ isoro Aleksandra rụkọọ ọrụ na mpaghara Balkan dị mkpa nke Europe. Obi dị anyị ụtọ ịnwe Aleksandra n'ụgbọ ọrụ anyị. ”
Lelee profaịlụ Rebuilding.travel maka Aleksandra Gardasevic Slavujica.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara iwughachi.ụzọ njem gaa www.rebuilding.travel.com